Indlela Yokuphila Isikhathi aspic okumnandi. Lapho jelly amanzi okugqumisa nendlela ukwenza kube okusobala?
Elimnandi jelly esobala - isivakashi njalo emadilini eziningi samaholide nemikhosi. Kwezinye izazi, umhlobiso eyinhloko etafuleni zemikhosi - ukudla exotic izithelo zasezindaweni ezishisayo. Kodwa abaningi bakhetha bendabuko, kodwa abawona ukudla kancane esihlwabusayo, okuyinto akunakubangelwa, nojeli. Ivame ukubizwa jelly. Nokho, akuzona zonke senkosikazi abasha onesibindi ukupheka jelly - iresiphi akuyona elula njengoba kungase kubonakale efika kuqala. Inqubo has umehluko wemisindo nemiqondo yamagama yayo. Ukuze Jelly kwathi nje esiphundu, kodwa futhi lutho, okumnandi, futhi enhle, eminye imithetho yakhe ukupheka kufanele kuqashelwe. Bunake lezi zincomo - nojeli nakanjani babe isiginesha yakho isidlo, a nomhlobiso real kunoma edilini iholide.
Indlela ukukhetha inyama esifanele aspic?
Umthetho wokuqala we-ukulungiswa aspic esobala futhi esihlwabusayo - isisekelo sokuthethelelwa ukukhethwa izitsha. Ukupheka jelly ungathatha cishe kunoma iyiphi inyama at yakho ngokubona - ingulube, yenkomo, inkukhu noma turkey. Nokho, abaningi Omuny abanolwazi Kunconywa ukumisa ukukhetha ku yenkomo. Ngakho indlela ukulungiselela yenkomo aspic kuphela Kwezinye izingxenye isidumbu, uthatha inyama ithambo, ingxenye tibia, esemgwaqweni eduze inselo, noma yenkomo shin nge imithambo uqwanga noma lapho sihlala esikhunjeni. Lokhu kukhetha ubangelwa yokuthi ukubunjwa yabo, kukhona ekhethekile gelling ejenti ekhuthaza solidification okusheshayo umhluzi ngaphandle kokusebenzisa gelatin futhi ungenzi ezinamafu ngokuphakama ukubukeka. Ungasebenzisa eyodwa noma ezimbalwa izinhlobo inyama.
Lapho uthenga inyama isethi ngokwenza aspic ngempela ukuqinisekisa freshness yayo. Uma yenkomo has a iphunga othize "okungamahlalakhona", izindawo ezincane phezu, iminonjana ebonakalayo frost njalo, defrosts, noma umbala omnyama - kungcono ukuba ayiyeke le lokuthenga lomkhiqizo ezifana indlela ukupheka jelly okumnandi aphume ke ngeke zisebenze. Qiniseka ukuthi unakekele ukuthi isethi inyama ukuba cishe okuqukethwe efanayo inyama namathambo. Uma yenkomo inyama kakhulu, nje aspic Uqinisa. Kungokufanayo uya okuningi kakhulu amathambo. Ngakho-ke, ebaluleke kakhulu - iyona elithile konke.
inyama Ngakho fresh zokupheka aspic ekhethiwe. Okulandelayo, kubalulekile ukulungiselela kahle. Inyama yenkomo kufanele ofakwe - kuyasiza balahle iminonjana igazi futhi unikeze enhle esobala isisekelo aspic. Uma inyama akusho cwilisa, umhluzi kuyinto turbid futhi maloappetitnym. Beka yenkomo ngamanzi abandayo bese ushiye for kwamahora ambalwa ngaphambi ukupheka jelly. Indlela wekhaya efanayo njalo ukuthi inyama kufanele ngokupheleleyo dibikeza nga chichiza, kodwa ngenye indlela yokugwema iminonjana asele wegazi, futhi rigidity we izikhumba. Ngemva kokumunca, ungakwazi ngokuphepha uqhubekele ahlabayo. Kungcono ukusebenzisa hlaba ummese ekhethekile noma hacksaw ngamazinyo ezinkulu abukhali - ingasetshenziswa ukuze ngabona amathambo ehlezi yenkomo ukuze kwakungekho izicucu. Uma nje ukusika yenkomo imbazo, ukuthi uhlale imiphetho ebukhali phezu amathambo. Ngokulandelayo, ukuhlubula ummese inyama, bamkhulula kusukela izingcezwana ithambo, ukulungiselela nezinye izithako ukulungiswa kokudla.
Izithako ezidingayo ukwenza jelly
inyama yenkomo noma usethe yokukukala 2 kuya ku-4 kg.
ngamanzi abandayo Clean, lihlanjululwe kangcono.
Usawoti ukunambitha (mayelana lapho ukwengeza usawoti jelly, ngezansi).
2-3 ama ezinkulu.
2-4 izaqathe ezinkulu.
Ugarliki - 6-8 PC.
Izinongo kanye namakhambi ozikhethele - leaf bay, emnyama, pepper amnandi, upelepele obomvu, parsley impande kanye isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, dill.
Izigaba eyinhloko ukupheka aspic
Ngokulandelayo, indlela ukupheka jelly okumnandi. Beka kuphekwe inyama isethi epanini bese sigcwale amanzi ahlanzekile abandayo. Kungcono ukungena ukulungiswa lokhu dish nahlanza noma elicwengekileyo emanzini. Uma usebenzisa amanzi ethafeni kusukela empompini, kuyoba awokuthi kakhulu okwenziwe ezinodaka umhluzi umthunzi. Ngaphezu kwalokho, amanzi kampompi has a ezingcolisa okuqondile okungakusiza ukunikeza ukunambitheka ezingemnandi jelly isiqedile. Amanzi kufanele ethathwe isilinganiso 1: 2 ukuze inyama - okusho ukuthi 1 kg yenkomo bazodinga 2 L amanzi abandayo ukuhlanzwa. yenkomo izingxenye walala esondelene kakhulu inyama ngokupheleleyo dibikeza amanzi. Ngomlilo.
Abaningi Omuny abanolwazi Kunconywa ukupheka jelly kuphela ukushisa low - ukuze uthole crystal umhluzi ecacile futhi icacile. Uma ukupheka phezu ukushisa high, kukhona ingozi ukuthi kuba esinamafu.
Ngakho, indlela ukupheka jelly. Ngemuva kwemizuzu engu-20-30, kanye umhluzi iqala ukubilisa, udinga ukuqoqa ngokucophelela zonke Foam ubuso bayo. I Foam bayovuka ngesikhathi sonke ukupheka, ngakho-ke kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukuqoqa ngokucophelela njalo. Ngokusebenzisa le nqubo, umhluzi kuyoba kucace kahle futhi waba muhle. labapheki abaningi abadumile weluleka hhayi ukuqoqa Foam futhi ngokuphelele sokukhipha amanzi bokuqala futhi ukwenziwa ngoba inyama aspic. Khama zonke amanzi yenkomo ngokucophelela ngamanzi ahlanzekile ukugijima - ngakho inyama kusulwe Foam izinsalela futhi izinsalela.
Indlela yokufeza esobala umbala isidlo sesiphelile?
Umbuzo okuhlasela hhayi kuphela Wabasaqalayo emizi indlela yokwenza jelly okusobala? Konke ilula. I wageza inyama izingxenye setha futhi sibeke epanini bese umboza amanzi, kanye ugaye uma kunesidingo. Ngemva kwalokho, pan kungenziwa futhi agqoke umlilo omncane. Manje, ne ukubonakala Foam phezu umhluzi noma kungakhishwa amafutha umane ususe kulona usebenzisa skimmer. Njengoba kushiwo ngenhla, jelly simmered - yingakho inqubo ukulungiselela izitsha kungathatha amahora 5 kuya ku-10. Akubalulekile ngomzamo ukusheshisa inqubo eside sokulungiselela ukwandisa umlilo - umhluzi iba liguqubele kanye Brawn yakho uthole alithandeki futhi aba noketshezi olunganambitheki. Ngaphezu kwalokho, ukupheka eside phezu ukushisa low kusiza yokuzigxilisa emihle Brawn esiphelele - awudingi ukusebenzisa gelatin noma ezinye izinto.
Imithetho ngokunezela izinongo kanye namakhambi
Uma thumba jelly, embozwe, amahora 4-5, sekuyisikhathi banezela izinongo kanye namakhambi. Lokhu kwenzeka kuze kube ngomzuzu lapho jelly usawoti (yenkomo ngokukhethekile) kuyoba kudingekile. Ungafaki lezi izithako ngaphambi umnqamulajuqu - ekupheleni ukupheka, balahlekelwa ukunambitheka alandisa iphunga okubabayo. Ukuze aspic Kunconywa ukuba asebenzise imifino yonke, hhayi kwasani kubo. Ungathatha isanqante nezinye imifino ngqo esikhumbeni ngaphandle uyaxebuka, - nje kugeze kahle ngaphansi kwamanzi agelezayo. Uma ungathandi le ndlela, uhlanze imifino ehlutshiwe, uthathe yizicucu kodwa akufanele kube. Abaningi baba ekulungiseleleni jelly lonke onion ongahluziwe - lesi senzo kuyangisiza umhluzi abe luhlaza ukukhanya segolide. clove garlic zingafakwa nganoma iyiphi indlela oyikhethayo - lonke noma oqoshiwe. Ngesikhathi esifanayo, engeza jelly esikhathini esizayo ezihlukahlukene nezithako ukuze esilindele wakho - a piquancy ekhethekile futhi akukho ukunambitheka elingenakuqhathaniswa isidlo unika emnyama, pepper elimnandi, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi noma parsley, bay leaf. Kodwa noma kunjalo hhayi ubaluleke kakhulu kangakanani abashisekayo okubabayo - jelly Ready ukunambitheka emangalisayo obucayi okuye kwakhiqizwa yimisebenzi kalula bonakalise izinongo hot.
Lapho udinga ukwengeza usawoti yenkomo jellied?
I oyisisekelo sokudla okwehla esiphundu kanye esihlwabusayo - the usawoti efanele. Lapho jelly amanzi okugqumisa? Khumbula ukuthi kumele jellied usawoti imizuzu 20-30 ngaphambi kokuphela ekuwulungiseleleni. Uma usawoti isidlo ngaphambi, imiphumela qiniseka udumazeke. Inyama ubamba kakhulu usawoti. Futhi ngisho ingxenye encane, uthele ekuqaleni ukupheka, ungenza isidlo sakho nje engenakudliwa ngobubi bawo. Ngaphezu kwalokho, umhluzi kufanele ibila okungenani 5 amawashi - phakathi naleso sikhathi amanzi kuso amathumba kakhulu, ngakho emakamu usawoti in umhluzi ngokweqile. Inketho engcono, uma usawoti jelly - kungcono isigamu sehora ngaphambi kokuphela ukupheka.
Thina ugaye inyama ivuthwa kahle
Uma jelly iphekwe, uvala ekushiseni futhi ngobumnene ngesipuni slotted, asuse inyama kusukela pan ngomumo. onion lonke kanye izaqathe Ungase futhi ukuhlanza - kakade base eseyifezile injongo yabo. Cool inyama kancane okuphekiwe. Okulandelayo, inyama okuphekwe kufanele kahle olwembiza. Lokhu kungenziwa nje ngesandla noma usebenzise ummese encane ngawo ukwehlukanisa ngokucophelela inyama kusukela amathambo hryaschik. Abantu abaningi bakhetha ukusebenzisa ukugaya inyama ukudla processor noma inyama grinder, kodwa endabeni ukulungiswa aspic izindlela ezinjalo kufanele kugwenywe, njengoba indlela enjalo ukugaya isidlo esiphelele uzolahlekelwa ukunambitheka layo eliyingqayizivele. Qiniseka ukuthi inyama eqeda kwakungekho amathambo amancane, izikhumba noma izinsalela hryaschik. Grind ngokusebenzisa cindezela ugarliki uhlanganise nabo inyama ewumphumela. Garlic Kuhle ukungayidli usike ngommese, futhi ibenze ngokusebenzisa cindezela ekhethekile - ngakho kungcono kakhulu ixubene yenkomo ngeke izingcezu ezinkulu inobudlabha.
Gcwalisa inyama ivuthwa kahle
Ezansi amapuleti ezijulile noma emathileyi futhi beka inyama oqoshiwe exutshwe garlic. Uma ufuna ukwenza ukudalwa akho Culinary licace nokuningi yokuqala, ungakwazi agqoke amapuleti phansi izingcezu abilisiwe amaqanda isikhuphasha noma izaqathe, kanye nanoma yimiphi eminye imikhiqizo lwakho olukhethile. Inyama kumelwe sisetshenziselwe umhluzi okunosawoti etholwe (mayelana nokuthi amanzi okugqumisa jelly, sekushiwo). Kuze kube yimanje, kufanele kube ngokucophelela nzima ngokusebenzisa ngesihlungo emihle noma indwangu gauze is eligoqiwe ngesigamu. zisuswe Ngakho kusukela umhluzi hryaschik izingcezu ezincane of amathambo, amafutha. Ngenxa yalokho, kuba elibushelelezi, elinombala okumsulwa futhi umthunzi emnandi. Kulungele umhluzi kancane onezinkinga epanini phezu ukushisa low bese ugcwalisa nabo kuphekwe inyama isikhunta. Uma usebenzisa ekulungiseleleni gelatin aspic, sekuyisikhathi ukuwengeza umhluzi futhi lokhu isithako. Ukuthatha lokhu ingilazi kakade walungisa benomhluzi elicwengekileyo, chaza ke omunye sachet gelatin bese wengeza ingxube umphumela umhluzi esisele, ngaphambi uyithela emfuleni isikhunta.
Kunengqondo ukuphetha ngokuthi i-emizi umbuzo eyindida kunazo zonke - kuyinto umbuzo uma usawoti jelly. Kodwa lokhu akulona iqiniso. Kukhona eyodwa isinyathelo ukulungiselela le isidlo, elibangela eziningi nezindaba - lukhuni.
Ukuze uthole ephelele solidification aspic wayedinga isikhathi esiningi - kusuka amahora 4 kuya ku-10. Ungakwazi ukushiya isikhunta nge elimnandi inyama isidlo lonke ebusuku. Ukuze okuphekiwe jelly simisiwe, kuzomele lokushisa cool, okuyinto ngezansi ekamelweni lokushisa. Ungakwazi ukushiya isidlo on emphemeni noma efasiteleni - kodwa lezi zindawo azizifanelekeli ngokuphelele nobusika. Ngezinye ongaphakeme lokushisa ukusebenza jelly obucayi kwesokunxele on emphemeni, nje peremerznet futhi ngokuphelele ukulahlekelwa ukunambitheka yayo esingenakuqhathaniswa olubucayi. Inketho kangcono izinga fast and high uthele aspic - esiqandisini.
Kungcono ungafaki izitsha nge yenkomo aspic phezulu eshalofini efrijini - njengoba yaziwa, kuyinto ephansi lokushisa zone, futhi inyama yakho izibiliboco nje peremerznet. Ungabeki isikhunta nge yenkomo nojeli eshalofini phansi efrijini - kungcono lapha, kunalokho, lingazenzi zibe lukhuni. Lesikahle kungaba eshalofini maphakathi ne elilungile control lokushisa.
Ngakho, indlela ukupheka futhi nini amanzi okugqumisa jelly, niyazi. Futhi zonke senzile kadokotela. Manje wobuciko akho Culinary usulungile, kodwa lokho isicelo? Impendulo bendabuko yalo mbuzo - ezihlukile ashisayo nososo, lwesinaphi, horseradish noma adjika. Ungasebenzisa umsebenzi obucayi inyama isidlo nge inani elincane usoso wesoya - ke uyonika piquancy aspic ekhethekile. inhlanganisela Delicious jelly uzonikezwa ne amakhowe zifakwe emanzini anosawoti noma ukhukhamba, utamatisi fresh noma okusemathinini, isaladi ahlanzekile ngamakhambi ukunambitheka yakho.
umehluko wemisindo nemiqondo yamagama Okubaluleke nakakhulu
Ukuze yenkomo aspic Kwatholakala esihlwabusayo ngempela futhi mnandi, ukulandela imithetho elula ambalwa ekuwulungiseleleni.
I oyisisekelo zendlela yokwenza jelly esobala - noma kunjalo, musa ngeza amanzi ukuze inyama, osuvele okuphekiwe. Uma e inqubo ukupheka in umhluzi isipikili ingxenye entsha amanzi, uzolahlekelwa nombala omuhle ayevumela futhi babe esinamafu. Ngaphezu kwalokho, lokhu isobho cishe ungalokothi zilimaze ngaphandle kwalokho gelatin. Kulokhu, kufanele ngokushesha uthele epanini ne yenkomo amanzi kancane kuka udinga - lapho abilayo ngeke lemali edingekayo umhluzi, futhi umbala akazange ahlupheke.
Nalapha futhi, uma usawoti lapho upheka jelly. Lapho kulungiselelwa inyama ithenda izibiliboco akufanele akwenze lokhu ekuqaleni noma maphakathi inqubo. Uma upheka umhluzi amathumba iba te ngaphezulu, emakamu usawoti kakhulu anda. Yingakho ngisho ingcosana encane aphonswe ebhodweni ne jelly ekuqaleni ukupheka, kungenza kube anosawoti engenakudliwa ngobubi bawo.
Abaningi ungayithandi ukunambitheka ethile ngokugqamile ukuthi kungaba ngomumo yenkomo jellied noma yengulube. Gwema lokhu mkhuba ezingemnandi kusiza ngendlela elula - qiniseka sokukhipha lokuqala amanzi lapho kuphekwe inyama. Ngakho ngeke nje ukususa fat ngokweqile kusukela umhluzi, kodwa futhi ukwenza isidlo eseqedile aphansi in kilojoule futhi esindayo phezu esiswini.
Akubalulekile ukuzama ukubeka epanini nge umhluzi 10 kg imikhiqizo ehlukahlukene inyama. Qaphela ukuthi uma amanzi enyakaza inyama pan kumele amboze okungenani 2-3 cm. Lokhu kuyadingeka ukuze kuholele inetha ubuningi edingekayo benomhluzi elimnandi. Uma amanzi wakuqala pan lungaphezu - awusebenzi ubilise ngesikhathi ukupheka, futhi umhluzi ngeke yokuzigxilisa ezimbi. Ngesikhathi esifanayo uma ungeza amanzi kancane kakhulu khona inkinga okuphambene - ngokushesha amathumba kude futhi kuyodingeka gcwalisa kuso ingxenye entsha amanzi. Kulokhu, musa ugweme ezingemnandi umbala ezinodaka ku eseqedile inyama izitsha.
5-10 amahora - ngakho udinga ukupheka jelly. Indlela akakubekezeleli ekubalekeni nokunganaki.
Omama abaningi abasemakhaya abanolwazi Kunconywa ukuba ulahle inyama uqwanga futhi isikhumba ukuthi wena ukuyikhipha ngemuva kokuphela ukupheka yenkomo. Ngokuphelele ugaye mikhiqizo usebenzisa ummese, grinder noma ukudla processor ke ngobumnene uhlanganise ingxube okuholela nge yenkomo okuphekiwe. Njengoba ubizwa emithanjeni hryaschik eyaziwa futhi iqukethe gelling ejenti athize ukukhuthaza solidification ngokushesha aspic siphelile ngaphandle kokusebenzisa gelatin. Ngesikhathi ukunambitheka efanayo izitsha obucayi akazange eziwohlokayo.
Ngakho indlela ukupheka jelly okumnandi - kuba kukhathaza futhi kudinga ikhono elithile, musa ngicasuke uma jelly yakho yokuqala Kwatholakala akamuhle oyilindele. Nasi umkhuba Culinary bekezela - isidlo sakho kuyoba umhlobiso oyinhloko noma iyiphi ithebula holiday.
Lungiselela isobho: isobho ukuze nokunye okufana nokolweni, amazambane, i-pasta.
Indlela eyayigcwele inkukhu imilenze?
Dairy noodle - iresiphi for ezikulu nezincani
Ukuhlanzwa kwegazi: ukubaluleka kwenqubo kanye nezindlela zokuqhuba
Bandstand Isi-Chuvash. Biography kanye lokusungula zezinkanyezi
United Amaphikseli: zokubuyekeza komsebenzisi
Ikhekhe ngemifino kanye noshizi - iresiphi ngesithombe
Ukubuyekezwa kwe-Mexidol njengokwakheka okuqhubekayo kwe-nootropic yasekhaya
Kuphi ukuhamba Petersburg
OKUBI "lecithin yethu": ukubuyekezwa, ukwakheka, yokusetshenziswa